Waxoogaa Qodida, Sawirka Baalalka, Nalalka Qorsheeyaha, Farta Wadajirka Mashiinka - HAN-C
Amarkaaga Deg-degga ah waxaa si buuxda loo damaanad qaadi doonaa iyadoo ku filan hadda.
Daraasado dowel adag oo carbide ah oo leh 3 geesood oo goyn ah ...
HW dowel oo leh 3 goynta geesaha-godka indhoolayaasha ...
Hawlaha adag ee carbide dowel ee loogu talagalay daloolka
4 Futada waxqabadka sare iyada oo god dowel dr ...
4 duulis dowel warshadaha daloolin iyada oo loo marayo hol ...
Habka joogtada ah ee horumarinta iyo soo saarista gudaha Shiinaha.
Daab Wareeg ah
Wareeg wareeg ah oo u diyaar ah shaqada alwaaxda
BARNAAMIJYADA GARGAARKA CARBIDE - CUTTER
caleemaha wareejinta carbide
shiinaha bacaha wareejinta carbide
shaqada mashiinka alwaaxa
layliga alwaaxa ee qaybaha alaabta guriga
maxay dadku markasta noo doortaan?
Tilmaamaha ugu dambeeya ee noocyada wareegtada ...
Mashiinka Wareegga Wareegga ah waa eray guud oo loo yaqaan 'mindiyo wareegsan' oo loo isticmaalo in lagu jaro waxyaabo kala duwan. Dad badan ayaa faham yar ka haysta miinshaar wareegsan ...
Waxqabadka Kooxda Koowaad ee 2021
Sabtidii la soo dhaafay, waxaan kaqeyb qaadanay howlo dhisme kooxeed hal maalin ah oo shirkadda ka socda. In kasta oo ay maalin uun ahayd, haddana wax badan baa iiga faa’iiday. Bilowga howlaha dhismaha League-ga, waxaa ...
10ka qalab ee ugu sareeya ee loo isticmaalo automati alwaaxa ...
In kasta oo ay jiraan wax badan oo t handеѕ ah oo ah qalab gacmeed oo aan uѕе fоr wооdwоrking, laakiin shaqadu ma noqon doonto mid aan loo isticmaalin аt lеаѕt оnе alwaaxa mасhinе. Waxaa jira waxyaabo badan oo alwaax ah ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya CNC carbid ...
Hordhac: Qalabyadu waxay noo suurta geliyeen inaan qabanno hawlo laga yaabo inay dhib ku tahay ama aan macquul ahayn inaan si kale u qabanno. Daloolinku waa tusaale fiican oo tan ah. Qoditaan la'aan ...
3 faa'iidooyinka ugu waaweyn ee carbide layli barbar ...
Horumarka degdega ah ee qalabka mashiinka CNC, dalabyada carbiska tungsten carbide iyo layliska biraha xawaaraha sare ku shaqeeya ayaa sidoo kale helay feejignaan ballaaran, iyo codsiga carbide dril ...
Waayo-aragnimadeennu waa tiro-yar tahay
Marka ugu horeysa ee aad nalaxariirto, Dhageyso waxa ay macaamiisheenu naga sheegaan.
Lily Iibsade USA
Waxaan jecelahay shirkadan waqti dheer, markasta oo ay markab igu soo diri karaan waqtigooda, kooxdooda QC-na waa mid aad u adag, taas oo i siisa kalsooni tayo sare leh
Edsion South Africa Iibsade
Waxyaabaha ay soo saarto shirkaddani waa kuwo tartan badan leh, markasta waqti ayey ii soo diri karaan markasta, kooxdooda QC-na waa mid aad u adag, taas oo i siisa kalsooni tayo sare leh.
Tom UK Iibsade
Shirkaddani waxay ila shaqeyneysay muddo 5 sano ah, alaabtu waa mid waqtigeeda ku habboon, xawaaraha gaarsiinta waa mid aad u dhakhso badan, qiimahayguna waa ka tartan badan yahay suuqa.
QAYB KASTA - CAYAAR KASTA - QIIMAHA BULSHADA
Weydii Quote Hadda!
uga soo jawaab 7/24 saacadood gudahood
Macluumaadka emaylkaaga ayaa si sir ah loo ilaalin doonaa & shaqaalahayagu waxay hubinayaan in macluumaadkaaga gaarka ah. gabi ahaanba waa amaan!